10 Utywala Utywala Ukuzama kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Utywala Utywala Ukuzama kwihlabathi liphela
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 13/08/2021)
Iiresiphi eziyimfihlo, ukuthanda izinto ezibangela ingqondo, likhoboka lotywala, zehlabathi eyona imivalo kwaye iiklabhu ziyakhonza ezi 10 kufuneka uzame utywala. Ukusuka eChina ukuya eYurophu, ezinye 10 iziselo ezinxilisayo ukuzama kwihlabathi liphela zingamakhulu ambalwa eminyaka ubudala. Na lyo line, zithandwa kakhulu, nokubamba isiselo okanye 2, kwiholide yakho ngamava angaphoswa.
1. Utywala Utywala Ukuzama kwihlabathi liphela: IAperol Spritz e-Itali
I-cocktail esekwe kwiwayini, I-Aperol Spritz imnandi kwaye izithako zayo ziya kwenza ngexabiso elifanelekileyo ngaphambi kokuba kufike izifundo eziphambili. I-Spritz sisithandwa esidumileyo eMantla e-Itali, okokuqala kwavela eVenice. I-spritz ngumxube weCampari, Iprosecco, kunye namanzi anesoda, emkhenkceni, ke ilungele ukuvuselelwa phezulu ikhefu lakho lesixeko lekhefu.
Ngokuqinisekileyo uya kusibona isiselo esinombala obomvu-orenji kwiiglasi zewayini eziphezulu, phantse kuzo zonke iitafile zokutyela e-Itali. I-Aperol spritz iyahlaziya kwaye ilungile kwiintsuku ezishushu zaseMeditera zasehlotyeni, ke kuya kufuneka uzame esi siselo sinxilisayo xa usitya e-Itali.
2. Ukuphelisa iFrance
Emva kokuvalwa 100 iminyaka eFrance, I-Fairy eluhlaza ifumana ukuthandwa kwakhona. Esi siselo sinxilisayo sasiyintandokazi phakathi kwababhali baseParis kunye namagcisa 19-20th ngekhulu, ikakhulu eMontmartre. I-Absinthe yenye ye 10 iziselo ezinxilisayo ezinamandla ukuzama emhlabeni wonke.
namhlanje, unokuba nefoto ye-absinthe, kodwa kuphela kukudubula kuba esi siselo sinamandla kakhulu, kwimivalo emininzi eParis. La Fee Verte, Lulu Mhlophe, L'Absinthe ikhefi, zimbalwa zezona ndawo zibalaseleyo apho unokuzama khona esona siselo sinxilisayo emhlabeni. kunjalo, izithako ezisisiseko oza kuzingcamla kuzo zonke iintlobo ze-absinthe zi-anise, umhlonyane iintyatyambo, kunye nefennel emnandi.
3. ISangria eSpain
Mhlawumbi ubungazi ukuba "iSangria" ivela kwigama elithi "Sangre", igazi, ngeSpanish. Akukho nto inokukhathazeka malunga nezi zithako zotywala, Eli gama likhethekileyo libhekisa kumbala obomvu oqinileyo. Akukho nto ilunge ngakumbi kunekomityi yeSangria emva kwemini kunye nesitya sikaPaella.
AmaRoma ayengabokuqala ukudala iSangria kwiidiliya kumaXesha Aphakathi. Isiselo somdiliya saba sisiselo esinxilisayo esidumileyo emva kotywala obuninzi ukugcina ibhaktiriya ingekho. I-sangria yendabuko yenziwe ngeediliya zeTempranillo, Ikhulile kwingingqi yeRioja, Speyin. kunjalo, ungazama esi siselo sinxilisayo kuyo yonke indawo eSpain nasePortugal.
Iindawo ezimbalwa ezicetyiswayo ezineyona Sangria ibalaseleyo eBarcelona: cava kunye ne-red Sangria eArcano, ivatala kunye neSangria kwiiTikiti.
4. Gin eNgilani
I-gin yafika kuqala eBritane ivela eHolland ngenkulungwane ye-18. Isizathu sokuba i-Gin yenziwe ngamajikijolo asendle, yiyo loo nto i-Gin sisiselo esenziwe ngamajikijolo exutywe nesoda, amanzi, kwaye ngamanye amaxesha iswiti. I-gin yayisisiselo sokuqala esazisa abantu basetyhini kunye nabesilisa kwii-pub zaseNgilani zonke. Isizathu sikwinqanaba eliphezulu lotywala, ukwenza konke ukuthintelwa kuphele.
namhlanje, I-Gin ixutywe nezinto ezahlukeneyo: Mint, Iingcezu zeelamuni, iinkozo zepepile, kunye namanzi abomvu-orenji. Kuba uGin unxila kakhulu, uya kunxila kunesantya sokukhanya. Ngaloo ndlela, kusoloko kucetyiswa ukuya kwimivalo kwiqela. Ngale ndlela ukhuselekile komnye Olona hlaselo lukhulu lokuhamba ukunqanda umhlaba wonke, njengendawo enobuhlobo efihlakeleyo.
5. IRiphabhlikhi yaseCzech
I-icon yase-Czech Republic yotywala bubhiya. Ibhiya litshiphu kunamanzi eCzechia, Kwaye ababaninzi abantu abayaziyo into yokuba kufuneka utywala ubuzame yi-Becherovska. Kuko oko, isiselo esinxilisayo seBecherovska sithandwa kakhulu ebusika. Esi siselo siqulathe ngaphezulu kwe 20 iintlobo zemifuno, Isinamoni ikhethiwe, exutywe neeperile okanye ipayina. Oku kungenxa yencasa eyomeleleyo yamayeza, Ewe kunjalo 38% utywala.
Indawo efanelekileyo yokuzama i-Becherovska yi-Becher's Bar. Le bar ipholileyo ibizwa ngegama likaJosef Vitus Becher, owaguqula utywala bube liyeza lokugaya ukutya, utywala obukrakra namhlanje, buyela ngaphakathi 1807.
6. Indebe yePimm yaseUnited Kingdom
Ukuya eWimbledon okanye kwiChelsea Showy yonyaka kwiholide yakho yesiNgesi? Uya kusela ngaphezulu 1 indebe yePimm. Iipims yeyona nto iselwayo kwihlobo laseNgilane kwiminyhadala yehlobo, iswiti, ngumkhenkce, kwaye wakhonza ngeziqhamo, ilungele iintsuku ezishushu zasehlotyeni.
kunjalo, Sukuphosisa esi siselo seziqhamo ukuba sibe yinto entle nje, kuba iqulethe 25% utywala. Ukwengeza, Iipims zisekwe kwi-gin eyongeza kumanqanaba otywala, ke unokungaqapheli nokuba kanjani 1-2 iziselo zikufumana ngaphezulu kweengcebiso kwi iminyhadala yaseBritani enkulu.
7. Utywala Utywala Ukuzama kwihlabathi liphela ebusika: Gluhwein
Ixesha leKrisimesi lelinye lamaxesha amahle okuhamba eYurophu, yaye iimarike Christmas zezona zinomtsalane omangalisayo. I-Gluhwein yiwayini enqabileyo emangalisayo, kwaye ungaziva kwiimarike zeKrisimesi eJamani, Ostriya , naseSwitzerland, landela nje izihlwele ezonwabileyo.
Ngokungafaniyo newayini ebomvu, Imnandi iGluhwein, exutywe nesitrasi, izinongo, kunye nesinamon. Ukwengeza, uya kuyithenga ifudumele, ke iya kukubonelela ngekhefu eliswiti nelithuthuzelayo lokuhambahamba kubusika obubandayo baseYurophu. Ngokuchasene neziselo ezibandayo zemozulu, I-Schnaps yenye yeendlela ezintle kwiziselo ezinxilisayo ukuzama xa useYurophu.
8. Iziselo ezinxilisayo ukuzama eTshayina: Utywala bukaMaotai
Utywala besizwe saseTshayina iMaotai buveliswa kwiphondo laseGuizhou. UMaotai waqala ukuveliswa ngexesha lobukhosi bukaMing ngenkulungwane ye-16. Esi kufuneka sizame isiselo esinxilisayo saseTshayina senziwe ngeenkozo kwinkqubo ethatha iminyaka embalwa de kube lo mxube ukuze utywala buphefumle ngokufanelekileyo.
ke, ukuba wena akunguye uhamba eTshayina, ke ngokuqinisekileyo zama esi siselo sikhethekileyo seMaotami. Kukulungele ukungcamla kuyo 20-25 iqondo lobushushu, kwiglasi ekhethekileyo emile okwe tulip. Oku kuyakuvumela ukuba ungcamle iaroma etyebileyo egxile kule soy isosi-incasa yotywala yaseTshayina.
9. IGrappa e-Itali
Ungayingcamla le pomace imnandi – Ibranti yeediliya ithandwa eMantla e-Itali, Swizalend, kunye neSan Marino. Ngelixa usela iAperol ngesidlo sasemini, i-grappa sisiselo sasemva kwesidlo sangokuhlwa, ukunceda ukugaya ipasta enzima okanye ukutya kwe-pizza. ngoko ke, Ngokungafaniyo newayini yakudala uya kusela kwiiglasi zewayini eziphezulu, igrappa iya kuza kwiiglasi ezincinci ze 1-2 iiununci.
Ukwengeza, unokuzama iGrappa kunye ne-espresso emfutshane, okanye ungcamle okuxutywe kwii-cocktails, ngolunye uhlobo, uyakonwabela ukuzama esi siselo saziwayo sotywala sase-Itali, kwaye kufuneka uyicofe kwindawo oza kuzama ukutya kuyo kunye neziselo e-Itali.
10. Jenever eBelgium
Ezona tywala zidala eYurophu, Jenever imvelaphi yeGin. kunjalo, namhlanje ezi zimbini ziziselo ezibini ezahlukileyo kakhulu zotywala. Xa useBelgium unokuzama iGenever endala kunye nesencinci, iGen encinci njengesixhobo sokuzonwabisa, ngelixa iGen endala emva kwesidlo sangokuhlwa njengengqengqelo.
IJenever ngumoya waseBelgium ongaphezulu kwe 500 iminyaka. Uninzi luya eBelgium ngeenjongo zokungcamla ibhiya yaseBelgium. Na lyo line, UJenever sisiselo esinxilisayo sendabuko eBelgium. Ukuba unqwenela ukudibanisa iBelgium Jenever njengesikhumbuzo, khangela ibhotile eyenziwe ngodongwe, Iijogu ezenziwe ngesandla ezigcina utywala obumangalisayo.
Apha Gcina A Isitimela, siya konwaba ukukunceda ucwangcise iholide yakho kwihlabathi liphela. Eyona mijelo ilungileyo, pubs, namabala okuzama ezi 10 iziselo ezinxilisayo kwihlabathi lonke luhambo kaloliwe kude.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iziselo ezinxilisayo ezili-10 zokuzama kwihlabathi liphela" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#iziselo Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe